June | 2018 | University of Veterinary Science, Yezin
Ayeyarwaddy Man Hostel
Gandamar Ladies Hostel
Myitzu Ladies Hostel
Paung Laung Man Hostel
Han Lin Man Hostel
Zi Wa Ka Man Hostel
Department of Parasitology and Pharmacology
Department of Surgery and Theriogenology
Outstanding Students List
UVS Research Journal
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ပဉ္စမနှစ် BVSc ကျောင်းသားကျောင်းသူများသိရှိစေရန်
၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် နောက်ဆုံးနှစ် BVSc ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ ဘွဲ့ယူသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် မြတ်ဆရာပူဇော်ကန်တော့ပွဲ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ပွဲ
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ပွဲ
(၂၉) ကြိမ်မြောက် ၀ါဆို သင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ
Feedback for CSA 2018 field trip
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Posted By: Useron: June 26, 2018 In: Uncategorized
​မွေးမြူ​ရေးဆိုင်​ရာ​ဆေးတက္ကသိုလ်​ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်​နှစ်​ ​ဆေးခန်းဆိုင်​ရာပညာရပ်​များအသင်း နွားထိုးကြီးမြို့နယ်​သို့ ကွင်းဆင်း​လေ့လာ​ရေးခရီးစဉ်​
Posted By: Useron: June 24, 2018 In: Trip
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်​နှစ်​ ​ဆေးခန်းဆိုင်​ရာ ပညာရပ်​များအသင်း၏ ပဉ္စမနှစ်​ BVSc ​ကျောင်းသား၊ ​ကျောင်းသူ (၂၆၄) ဦးတို့သည်​ ကြီးကြပ်သူ ဆရာ ဆရာမ (၂၄)ဦး လိုက်ပါလျက် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်​အတွင်းရှိ...	Read more
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တံခွန်စိုက် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ
Posted By: Useron: June 19, 2018 In: News / Events
​မွေးမြူ​ရေးဆိုင်​ရာ​ဆေးတက္ကသိုလ်​၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တံခွန်စိုက် ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ ပိတ်ပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို (၁၈.၆.၂၀၁၈)​ရက်​နေ့ ညနေ​ပိုင်းတွင်​ ပြု...	Read more
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ၏ Public defence
Posted By: Useron: June 17, 2018 In: News / Events
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ၏ Public defence ကို (၁၇-၆-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။	Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း
Posted By: Useron: June 16, 2018 In: Exam Result
Posted By: Useron: June 15, 2018 In: News / Events
​မွေးမြူ​ရေးဆိုင်​ရာ​ဆေးတက္ကသိုလ်​၊ ​မွေးမြူ​ရေးပညာသင်​တန်း၊ တတိယနှစ်​နှင့်​ ​နောက်​ဆုံးနှစ်​ ​ကျောင်းသား/​ကျောင်းသူများအား (၁၄.၆.၂၀၁၈)​ရက်​နေ့ နံနက်​ပိုင်းတွင်​၊ ဆရာကြီး ပါ​မောက္ခ​ဒေါက်​တ...	Read more
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဝင်ခွင့် လူတွေ့နှုတ်ဖြေ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း
Posted By: Useron: June 12, 2018 In: Exam Result
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး လူတွေ့နှုတ်ဖြေ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း လူတွေ့နှုတ်ဖြေ ဖြေဆိုရမည့်ရက...	Read more
Increasing the quality, safety and capacity of food production for small-scale livestock farms in Myanmar စီမံကိန်းအတွက် အကြံပြုဆွေးနွေး
Posted By: Useron: June 06, 2018 In: News / Events
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် Increasing the quality, safety and capacity of food production for small-scale livestock farms in Myanmar စီမံကိန်းအား အကြံပြုဆွေးနွေ...	Read more
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေး တက္ကသိုလ် (ရေဆင်း)
Professor Dr Mar Mar Win
Nay Pyi Taw 15013 ,
This University started as Faculty of Veterinary Medicine Under Rangoon University in 1957. In 1967, it was upgraded to Institute of Animal Husbandry and Veterinary Science (IAHVS) in Insein, Rangoon. In 1981, IAHVS was moved to Yezin, Pyinmana. In 1994, IAHVS was transferred under the governance of Ministry of Livestock and Fisheries. Before 1997,the course was6years and changed to5years course in 1997. In 1999, the name of IAHVS was changed to University of Veterinary Science.